Ukuxela ubusela beMxholo kwi-Adsense njengoVukelo lwe-DMCA | Martech Zone
Ukuxela ubusela beMixholo kwi-Adsense njengolwaphulo-mthetho lweDMCA
NgoMvulo, Julayi 21, 2008 NgoMgqibelo, ngoJuni 25, 2016 Douglas Karr
Ndithathe isigqibo sokuya emfazweni nomshicileli oxhwile ukutya kwam kwaye ukhupha umxholo wam phantsi kwegama lakhe kunye newebhusayithi. Uqhuba intengiso kunye nokwenza imali kumxholo wendawo yam kwaye ndidiniwe yiyo. Abapapashi, kubandakanya iibhlog, banamalungelo phantsi kwe UMthetho weDivital Millennium Copyright Act.
Umthetho we-Digital Millennium Copyright Act (i-DMCA) ngumthetho wase-United States (owabekwa umthetho ngo-Okthobha u-1998) owomeleza ukhuseleko olusemthethweni lwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda angakhange afunyanwe kuMthetho weLungelo lokushicilela wase-US. Olu hlaziyo lwaluyimfuneko ukulungiselela ubuchwepheshe obutsha bonxibelelwano losasazo, ngakumbi ngokubhekisele kwi-intanethi. Utshintsho lomthetho wamalungelo obunini base-US ahambelana noMgaqo-nkqubo weLungelo lokuPhathwa kweHlabathi (i-WIPO) yesiVumelwano seLungelo lokushicilela kunye nesiVumelwano sokuSebenza kwePhonograms.
Ukujonga indawo yomshicileli, ndiye ndaphawula ukuba bakufumene ukutya nge-RSS feed yam. Oku kukwaphula umthetho Imigaqo yeNkonzo yeFeedBurner.
Okubaluleke ngakumbi, lo mpapashi usebenzisa intengiso yeAdsense. Umxholo wobusela kunye nokuqhuba iintengiso zeAdsense yi Ukophula ngokuthe ngqo iMigaqo yeNkonzo kaGoogle.
Ndiqhakamshelane ne-Adsense kwaye ndawuchaza lo mbandela, kwaye kuye kwahlangatyezwana neemfuno ezongezelelweyo zokuzigqiba. Indawo yeAdsense iyacacisa:
Ukukhawulezisa amandla ethu okuqhubekeka nesicelo sakho, nceda usebenzise le fomathi ilandelayo (kubandakanya iinombolo zecandelo):
Chonga ngokweenkcukacha ezaneleyo umsebenzi one-copyright okholelwa ukuba wophulwe umthetho. Umzekelo, "Umsebenzi one-copyright ekuthethwa ngawo ngumbhalo ovela kwi-http: //www.legal.com/legal_page.html."
Chonga umbandela owubangayo owaphula umthetho obunamalungelo okushicilela adweliswe kwinqaku # 1 apha ngasentla. Kuya kufuneka uchonge iphepha ngalinye ekuthiwa linemiyalelo yokwaphula umthetho ngokubonelela nge-URL yayo.
Nikezela ngolwazi olwaneleyo ukuvumela uGoogle ukuba aqhagamshelane nawe (idilesi ye-imeyile uyayikhetha).
Faka la mazwi alandelayo: "Ndiyakholelwa ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo ezinamalungelo okushicilela ezichazwe apha ngasentla kwiphepha lewebhu elichanekileyo aligunyaziswanga ngumnini welungelo lokushicilela, yiarhente yakhe okanye ngumthetho."
Faka ingxelo elandelayo: “Ndiyafunga, phantsi kwesigwebo sobuxoki, ukuba ulwazi olukwisaziso luchanekile kwaye ndingumnini welungelo lokushicilela okanye ndigunyazisiwe ukuba ndenze egameni le
umnini welungelo elilodwa elityholwayo. ”
Thumela unxibelelwano olubhaliweyo kule dilesi ilandelayo:
Yiya: Inkxaso yeAdSense, Izikhalazo zeDMCA
1600 I-Amphitheatre Parkway
I-Mountain View CA 94043
OKANYE Fax ku:
(650) 618-8507, Attn: Inkxaso yeAdSense, izikhalazo zeDMCA
Olu xwebhu luza kuthunyelwa ngeposi namhlanje!
tags: adsensecopyrightdmcaisikhalazo se-dmcaizikhalazo ze-dmcagoogle adsense
Ngaba iiBlogger kufuneka zilungise iimpazamo zazo?
Kutheni iNethiwekhi ingekho kuyo yonke iKharityhulamu?
Olo luluvo oluhle. Ndine-splogger ephakamisa umxholo wam okwethutyana kwaye iposti yakho indikhuthazile ukuba ndithathe inyathelo ngokunjalo. Akukhangeleki ngathi bayayisebenzisa ukongeza ingeniso, kunokuba isetyenziselwa ukuphinda-phinda ukugcwala kwabo bantu kwenye indawo. Gah.
Uxolo ukuva ngale Doug, ndiyathemba ukuba uza kuyilungisa.
UBarbara Ling, uMqeqeshi oSebenzayo
Esona sakhono silungileyo ekufumaneni oku kulungiswe !! Kudos kuwe ukuba usebenze.
Iminqweno emihle, uBarbara
Jul 12, 2010 ngo-11: 27 AM
Ngamana ungafaka isikhalazo kunye nenkampani yokubamba nayo.
Ngaba nomntu oba umxholo wam kunye nabantu abakhuphisana nabo kunye neebhloko ezininzi ezingezizo kurhwebo lwam.
Lo mfo unenethiwekhi yakhe yezinye iisayithi.
Kuba unayo yonke imixholo yethu malunga nesifuba kunye ne-aleji nayo yonke imixholo evela kwezinye iiblogi ezininzi, uhlala esikhupha ngokusithumela.
Kubangele ukudideka ngabantu abazama ukubuyela eposini.
Ndifaka isikhalazo kuGoogle ngoku.